Safal Khabar - भरतपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने सपना छ : मेयर रेणु दाहाल
भरतपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने सपना छ : मेयर रेणु दाहाल
आइतबार, २४ चैत २०७५, १५ : ०३
भरतपुर महानगरपालिकामा निर्वाचन भइरहँदा आफैंमा फरक विषयले निकै चर्चा पायो । मतपत्र च्यातिएको घटनाले लामो समयसम्म विवाद पनि भयो । अन्ततः मेयरमा रेणु दाहालले बाजी मारिन् । निर्वाचनमा जितेपछि दाहालले भरपुर महानगरपालिकालाई समृद्ध र विकसित बनाउन के कस्तो भूमिका खेलिरहेकी छन् त ? समृद्ध महानगर बनाउने उनका भावी योजना, हालसम्मका कार्य तथा चुनौती र समस्यामा केन्द्रित रही राधेश्याम खतिवडाले दाहालसँग गरेको कुराकानी :
अन्त्यमा महत्वपूर्ण केही छ कि ?
लामो समयपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । हामी आउँदा धेरै प्रणाली विकास गर्न आवश्यक थियो । हामीले विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल गरी योजना बनाएका छौं । भरतपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउनेगरी काम अघि बढाएका छौं । हामीले के गरेका छौं, त्यो अहिले नै देखिने विषय होइन । अब दुई वर्षपछि बल्ल महानगरको विकास देखिन्छ । अहिलेसम्म विकासका रूपमा सडकलाई प्रथामिकतामा राखिएको जस्तो बुझिन्छ । तर, अन्य धेरै कामहरू प्नि भएका छन् । त्यसलाई हेर्न, बुझ्न र अनुभूति गर्न अब दुई वर्ष कुर्नैपर्छ । भरतपुर महानगरपालिका देशकै नमुना सहर बन्ने कुरामा म ढुक्क छु । हाम्रो सपना भरतपुर महानगर स्मार्ट सिटी नै हो । - राजधानी राष्ट्रिय दैनिकबाट